प्रेममा रहेपनि बले र प्रिज्मालाई सार्वजनिक रुपमै प्रेम स्विकार गर्न किन स’मस्या ? – Sidha Kura
४४ लाख तिरेर कमाउन पठाएकी छोरीले जब ‘म म र्दै छु’ भनेर म्यासेज पठाएपछि …
जब विनयको मोबाइलमा छोरी भन्ने सपनाको यस्तो फोटो भेटियो,प्रहरी समेत च,कित पर्‍यो (भिडियो सहित)
श्वेता खड्का पछि रेखा थापा पनि विवादमा, राउटेको नाममा उठाएको पैसा कहाँ गयो ? (भिडियो हेर्नुस्)
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/प्रेममा रहेपनि बले र प्रिज्मालाई सार्वजनिक रुपमै प्रेम स्विकार गर्न किन स’मस्या ?
हाँस्य कलाकार सागर लम्साल ‘बले’ म्यूजिक भिडियोमा पनि चलेका मोडल हुन् । लकडाउनपछि म्यूजिक भिडियोमा उनको व्यस्तता बढेको छ । म्यूजिक भिडियोका महंगा मोडल समेत रहेका सागर पछिल्लो केही महिनादेखि मोडल प्रिज्मा खतिवडाको प्रेममा छन् । म्यूजिक भिडियो छायांकनका क्रममा नै सागर र प्रिज्माको भेट भएको थियो ।
हाँस्यटेलिसिरियल भद्रगोल हुँदै सक्किगो नी सम्म आइपुग्दा बलेको चर्चा पनि निकै नै लोभलाग्दो छ । उनले सिरियलमा प्रस्तुत गरेका हाउभाउ र बले डान्सलाई दर्शकले अौधी रुचाउँछन् ।चर्चित टेलिसिरियल भद्रगोलबाट हाँस्यकलाकारका रुपमा चिनिएका पछिल्लो समयको चर्चित मोडल सागर लम्साल क्षेत्री उर्फ बलेले पहिलोपटक प्रेमिका सार्वजनिक गरेका हुन् । कलाकारहरुको प्रेम सम्बन्धले मिडियामा बेला बेला चर्चा पाइरहेको बेला सागर लम्सालले पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रेमिका सँगको तस्बिर साझेदारी गरेका छन् ।
’ तर, उनले सोझो भाषामा प्रिज्मासँग प्रेम छ भन्न सकेनन् । बरु, उनले जुम्ल्याहा दिदीबहिनी प्रिज्मा र प्रिन्सीलाई एकसाथ जोड्न खोजे । उनले भने–‘अरुका लागि प्रिज्मा र प्रिन्सी फरक होलान् । तर, मेरा लागि एकै हुन् । म उनीहरुलाई अलग राखेर हेर्दिनँ ।’सागरले युटुबमा ‘बले इन्टरटेन्मेन्ट’ पनि संचालन गरेका छन् । उनले केही समय आफ्नो युटुब च्यानलमा म्यूजिक भिडियो नै अपलोड गर्ने बताए । बजारमा चलेको चर्चा अनुसार, प्रिन्सी पनि एक मोडलको प्रेममा छिन् । अब, सागर र प्रिज्माले सार्वजनिक रुपमै प्रिज्मासँगको प्रेमलाई कहिले स्विकार गर्ने हुन् यो भने प्रतिक्षाको बिषय बन्नेछ ।
वर्षौंपछि करिश्मा र राजेश एकैसाथमा, जब राजेश हमालले करिश्मालाई यस्तो भनेपछि (भिडियोसहित)
‘मुन्द्रेको कमेडीमा’ करिश्मा हाँसेको पति विनोदलाई मन परेन, पहिलो पटक खोले मुख !
चर्चित गायिका अन्जु पन्तले गरिन प्रेमी थीरसंग धुमधामले बिहे, के छोरी परितोशिका छिन् त खुशी ?भिडियो हेरौ :